imvamisa ephezulu yokushisela umshini-umshini womshini wokushisela we-RF
High Frequency zokushisela
Umshini Welding Wemvamisa Wemvamisa Ophezulu / Womshini Wokushisela we-PVC we-Welding plastic, njll.
High Frequency zokushisela, eyaziwa njengeRadio Frequency (RF) noma i-dielectric welding, inqubo yokuxuba izinto ndawonye ngokusebenzisa amandla emisakazo yomsakazo endaweni ezohlanganiswa. I-weld eholelekayo ingaba namandla njengezinto zokuqala. I-HF Welding incika ezindaweni ezithile zalokho okokushiselwa ukuze kubangele ukukhiqizwa kokushisa emkhakheni kagesi oshintshashintsha ngokushesha. Lokhu kusho ukuthi izinto ezithile kuphela ezingashiselwa kusetshenziswa le ndlela. Le nqubo ifaka ukufaka izingxenye ukuthi zihlanganiswe nemvamisa ephezulu (imvamisa kakhulu i-27.12MHz) inkambu kagesi, evame ukusetshenziswa phakathi kwamabha amabili ensimbi. Le migoqo futhi isebenza njengabafaka ingcindezi ngesikhathi sokushisa nokupholisa. Inkambu kagesi eshintshashintshayo ibangela ukuthi ama-molecule akwi-polar thermoplastics ashelele. Ngokuya ngejometri kanye nesikhathi se-dipole, la ma-molecule angahumusha okunye kwalokhu kunyakaza kwe-oscillatory kumandla ashisayo futhi kubangele ukushisa kwento. Isilinganiso salokhu kuxhumana yisici sokulahleka, okuyisilinganiso sokushisa nobuningi.
I-Polyvinylchloride (i-PVC) nama-polyurethanes yi-thermoplastics ejwayelekile kunazo zonke okumele ifakwe nge-RF. Kungenzeka ukuthi i-RF weld amanye ama-polymers afaka i-nylon, i-PET, i-PET-G, i-A-PET, i-EVA namanye ama-resin we-ABS, kepha kudingeka izimo ezikhethekile, ngokwesibonelo inayiloni ne-PET ziyashiselwa uma kusetshenziswa imigoqo yokushisela eshisiwe ngaphezu kwe Amandla we-RF.
I-HF welding ngokuvamile ayifanele i-PTFE, i-polycarbonate, i-polystyrene, i-polyethylene noma i-polypropylene. Kodwa-ke, ngenxa yemikhawulo ezayo ekusetshenzisweni kwe-PVC, ibanga elikhethekile le-polyolefin selakhiwe elinamandla okufakwa nge-HF welding.
Umsebenzi oyinhloko wokushisela i-HF ukwakha ukuhlangana ngosayizi ababili noma ngaphezulu beshidi. Kunezici eziningi zokuzikhethela ezikhona. Ithuluzi lokushisela lingabhalwa noma lifakwe kumaphrofayili ukuze linikeze yonke indawo eshiselwe ukubukeka kokuhlobisa noma lingafaka inqubo yokubhala ukufaka izinhlamvu, amalogo noma imiphumela yokuhlobisa ezintweni ezifakiwe. Ngokufaka umkhawulo wokusika oseduze kwendawo yokushisela, inqubo ingashisela ngasikhathi sinye futhi isike okokusebenza. Umphetho wokusika ucindezela ipulasitiki eshisayo ngokwanele ukuvumela okokusebenza okweqile ukuthi kudwengulwe, yingakho le nqubo ivame ukubizwa ngokuthi yi-weld-seal welding.
I-welder ejwayelekile epulasitiki iqukethe i-generator yemvamisa ephezulu (eyenza umsinga wamaza omsakazo), umshini wokucindezela umoya, i-electrode ehambisa umsinga wamaza omsakazo ezintweni ezishiselwe kanye nebhentshi lokushisela eligcina okubhaliwe endaweni. Umshini ungaba futhi nomugqa wokugxila ovame ukufakwa ngemuva kwe-electrode, okuholela emuva emuva kumshini (iphuzu lokubeka phansi). Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezinsimbi zepulasitiki, imishini ejwayelekile ngoseyili, imishini yokupakisha kanye nemishini ezenzakalelayo.
Ngokulawula ukushuna komshini, amandla wensimu angalungiswa entweni eshiselwe. Lapho ushisela insimbi, umshini uzungezwe yinkambu yamaza omsakazo okuthi, uma inamandla kakhulu, ishise umzimba ngandlela thile. Yilokhu opharetha adinga ukuvikelwa kukho. Amandla endima yamaza omsakazo ancike futhi ohlotsheni lomshini osetshenziswayo. Ngokuvamile, imishini enama-electrode avulekile abonakalayo (angenazinsimbi) anezinkambu ezinamandla kunemishini ene-electrode evalekile.
Lapho kuchazwa izinkambu ze-electromagnetic frequency frequency, kukhulunywa kaningi ngemikhakha. Amaza avunyelwe ama-welders epulasitiki angama-13.56, 27.12, noma ama-40.68 megahertz (MHz). Imvamisa yezimboni ethandwa kakhulu ye-HF welding yi-27.12MHz.
Izinkambu zemvamisa yomsakazo ezivela kumshiseli weplastiki zisakazeka zungeza umshini, kepha imvamisa kuba kuhle eceleni komshini lapho insimu iqine kakhulu kangangoba kudingeka kuthathwe izinyathelo. Amandla enkambu ancipha kakhulu nebanga ukusuka emthonjeni. Amandla wensimu anikezwa ngezilinganiso ezimbili ezihlukene: amandla wensimu kagesi alinganiswa ngama-volts ngemitha (V / m), bese kuthi amandla kazibuthe alinganiswe ngama-amperes ngemitha (A / m) ngayinye. Kokubili lokhu kumele kukalwe ukuthola umbono wokuthi inkundla yamaza omsakazo iqine kangakanani. Okwamanje okudlula kuwe uma uthinta okokusebenza (okukhona manje) kanye nalokho okudlula emzimbeni lapho kushisela (okwenziwe manje) nakho kufanele kulinganiswe.
Izinzuzo ze-High Frequency Welding Technology
Ukubekwa uphawu kwe-HF kwenzeka ngaphakathi ngaphakathi ngokusebenzisa okokusebenza uqobo njengomthombo wokushisa. Ukushisa kugxile kwelitshe le-weld ukuze izinto ezizungezile kungadingeki ukuthi zifudumale kakhulu ukuze zifike ezingeni lokushisa eliqondisiwe ejoyintini.
With Ukushisa kwe-HF kwenziwa kuphela lapho insimu inamandla. Lapho imijikelezo yejeneretha, ukushisa kucishiwe. Lokhu kuvumela ukulawula okukhulu kunani lamandla okubonwa yiloo nto kulo lonke umjikelezo. Ngaphezu kwalokho, ukushisa okwenziwe nge-HF akubonakali kukhanya njengokufa okufudumalayo. Lokhu kuvimbela ukwehliswa kokushisa kwento ehambisana ne-weld.
I-HF tooling ivame ukuqhutshwa "kubanda". Lokhu kusho ukuthi uma i-HF icishiwe, impahla iyeka ukufuthelana, kepha ihlala ingaphansi kwengcindezi. Ngale ndlela kungenzeka ukuthi kokubili ukushisa masinyane, ukushisela, nokupholisa okubhaliwe phansi kokucindezelwa. Ukulawulwa okuningi kwe-weld kuholela ekulawuleni okwengeziwe kokukhipha okukhiphayo, ngaleyo ndlela kwandise amandla e-weld.
Ama-welds e-RF "ahlanzekile" ngoba okuwukuphela kwento edingekayo ukukhiqiza i-HF weld yinto uqobo. Azikho izinto zokunamathisela noma imikhiqizo evela ku-HF
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi imvamisa ephezulu, imvamisa ephezulu Ukushisela i-PVC, imishini yokushisela imvamisa ephezulu, ukuphakama kwezinga eliphezulu, Induction Welding high frequency, ukudonsa imvamisa yomsakazo, RF, Ukushisela i-RF, Umshini wokushisela we-RF, I-RF yokushisela ipulasitiki Imeyili kwemikhumbi
induction brazing steel tube kuye ithubhu yethusi
imikhumbi yethangi lokushisa lokungenisa
Ukukhishwa kwe-Induction Brazing Carbide yamathuluzi wezokwelapha
Ipulasitiki Injection Molding nge-Induction Heating